Suzanne Simard: အပင်တွေ အချင်းချင်း စကားပြောကြပုံ - English-Video.net
Suzanne Simard: အပင်တွေ အချင်းချင်း စကားပြောကြပုံ
"သစ်တောဆိုတာ ကျွန်မတို့ မြင်ရတာထက် များစွာမှ ပိုပါတယ်" လို့ ဂေဟာဗေဒ ပညာရှင် Suzanne Simard က ဆိုပါတယ်။ ကနေဒါ သစ်တော ဌာနမှာ နှစ် ၃၀ ကြာ သူမ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ နောက်မှာ အံ့အားသင့်စရာ အချက်ကို သူ ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ် -- အပင်တွေ စကားပြောနိုင်ကြတယ်၊ မကြာခဏဆိုသလို အတော့်ကို ဝေးတဲ့ ဒေသအထိတောင် ပြောဆိုင်ကြပါတယ်။ ရှုပထွေးလှပေမဲ့ သဟဇာတ ရှိပုံရတဲ့ အပင်တွေရဲ့ လူမှုရေး ဘဝအကြောင်းကို ကြားသိရန် နှင့် သဘာဝကမ္ဘာကြီးကို အမြင်သစ်ဖြင့် ရှုမြင့်ဖို့ အသင့် ပြင်ထားပါ။
သစ်တော တစ်ခုထဲ လမ်းလျှောက်သွားနေတယ်လို့
လှပတဲ့ အပင်တွေ အကြောင်းကို ရှင်တို့
သစ်တော တစ်ခုရဲ့ အခြေခံ
ဖြစ်တာ ဟုတ်ပေမဲ့၊ သစ်တောဆိုတာ
ရှင်တို့ အပင်တွေ အကြောင်း စဉ်းစားကြပုံကို
ကျွန်မဟာ ဒီနေ့ ပြောင်းပစ်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မြေအောက်ကို ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
အခြားကမ္ဘာ တစ်ခုကို မြင်ရမယ်၊
ခွင့်ပြုလျက် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုတည်းလို
ပြုမူခွင့် ပေးကြတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေပါ။
အဲဒါကို ကျွန်မ ဘယ်လိုလုပ် သိလာလဲ။
ကျွန်မ British Columbia မှာ
သစ်တော ကြမ်းပြင်မှာ လှဲနေရင်း
ဧရာမ ကြီးမားတဲ့ အပင်တွေပါ။
ကျွန်မ အဖိုးဟာလည်း ကြီးမားခဲ့တယ်။
သူဟာ ကုန်းတွင်းပိုင်း တောထဲက
သစ်ကတိုး အပင်တွေကို ရွေးပြီး ခုတ်ခဲ့သူပါ။
အပင်တွေဟာ ဆိတ်ငြိမ်ကြပေမဲ့ ဆက်စပ်လျက်
ရှိနေကြပုံနှင့် ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့
မိသားစု အဲဒီထဲ ပါဝင်နေပုံပြောပြခဲ့တယ်။
သူရော ကျွန်မပါ သစ်တောအကြောင်း
ကျွန်မရဲ့ ပထမဦးဆုံး “တွေ့ရှိချက်ကြီး”က
ရေကန်နားက တောအိမ်ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ Jigs လို့ခေါ်တဲ့ ခွေးကလေး
အဖိုးဟာ ဂေါ်ပြားနဲ့အတူ ပြေးသွားလျက်
ခွေးကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
အဖိုးက အဲဒီ သစ်တော
ကျွန်မဟာ မြင်ရတဲ့ အမြစ်တွေကို
အဖြူရောင် mycelium ဆိုတဲ့ မှုအောက်ခြေ
အဲဒါရဲ့ အောက်မှာ အနီ နဲ့ အဝါရောင်ရှိ
အဖိုးနဲ့ ကျွန်မတို့ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့
ဒါပေမဲ့ အဲဒီတုန်းကမှာမှ ​
ကွန်ရက်တွေနဲ့ မြေဆီလွှာတို့ဟာ သစ်တောရဲ့
တကယ့် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်တာကို
အဲဒါနဲ့ သစ်တောပညာကို သင်ယူခဲ့တယ်။
မကြာမီမှာပဲ ကျွန်မဟာ စီးပွားဖြစ်
သစ်ထုတ်လုပ်ရေးကို တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ကြတဲ့
ဧရာမ လူတွေနဲ့ တွဲပြီး လုပ်ကိုင်လာတယ်။
မကြာမီမှာ ကျွန်မဟာ သူတို့နဲ့
ပေါ့ပလာ နဲ့ ဘုဇပတ်ပင်တွေကို
ထုတ်လုပ်နိုင်မယ့် အပင်တွေဆီ လမ်းတွေကို
ကြည့်ရတာ အနားမရှိ လှုပ်ရှားနေတဲ့
ဒီစီးပွားဖြစ် ယန္တားကို ရပ်မရနိုင်တော့ပါ။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်မဟာ ကျောင်းကို
ပြန်သွားပြီး အခြားကမ္ဘာကို လေ့လာခဲ့တယ်။
အမြစ်တွေဟာ နောက် ပျိုးပင် ထင်ရှူးပင်
ထံကို ကာဗွန်ကို ​လွှဲပြောင်း ပို့ပေး
အဲဒါက ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တာကို
တကယ့် သစ်တောထဲမှာရော အဲဒီလို
ဖြစ်နိုင်သလား ကျွန်မ စဉ်းစားမိတယ်။
လက်တွေ့ သစ်တောထဲက အပင်တွေကလည်း
ဒါပေမဲ့ အဲဒါ အငြင်းပွားစရာကြီးပါ။
လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တချို့ ထင်ကြတယ်။
ကျွန်မဟာ သုနေသနအတွက် ရန်ပုံငွေ
ရှာရန် အတော့်ကို ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။
သစ်တောရဲ့ အတွင်းပိုင်း နေရာတွင်
စမ်းသပ်မှု အချို့ကို လုပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်တုန်းကပါ။
အပင် ၈၀ စိုက်ပျိုးခဲ့တယ်၊
ဘုဇပတ်ပင်၊ Douglas ထင်ရှူး နဲ့
အနောက်တိုင်း သစ်ကတိုး ပင်တွေပါ။
ဘုဇပတ် နဲ့ ထင်ရှူး တို့ဟာ မြေအောက်မှာ
ကျွန်မဟာ စက်ပစ္စည်းတွေကို စုစည်းတယ်၊
Canadian Tire ထံ ကျွန်မ သွားတယ်။
ကျွန်မဟာ ပလပ်စတစ် အိတ်အချို့ နဲ့
တိပ်ခွေ၊ ကာဖို့ ပိတ်စတွေ၊
ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ထံမှ အဆင့်မြင့်
Geiger တိုင်းစက်၊ scintillation တိုင်းစက်၊
ထုထည်တိုင်း spectrometer၊ အဏုကြည့်စက်တွေ။
တကယ့်ကို အန္တရာယ်များတဲ့ အရာ
ကာဗွန် ဒိုင်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့နဲ့
stable isotope ကာဗွန်-၁၄
ကာဗွန် ဒိုင်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့ ပါတဲ့
ဖိအားမြင့် ပုလင်းတွေကို ယူခဲ့ရတယ်။
တရားဝင် ပါမစ် ရှိခဲ့တယ်။
အို၊ ပစ္စည်းတချို့ မေ့သွားတယ်၊
အရေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊
ကျွန်မ အသက်ရှူစက်ရဲ့ ဖီလ်တာ။
ကျွန်မတို့က စမ်းသပ်မှအတွက် ဖြစ်တဲ့
သွားကြတော့ ဝက်ဝံမကြီးနဲ့ သူ့ကလေးက
ကျွန်မ ဝက်ဝံဖြန်းဆေး မပါခဲ့ဘူး။
ကနေဒါနိုင်ငံထဲက သစ်တောထဲ သုတေသန
လုပ်ရတာ ဒီလိုဟာမျိုး အားလုံးအသိပါ။
ကျွန်မ နောက်တနေ့ ပြန်လာတော့၊
ဝက်ဝံမကြီး နဲ့ သူ့ကလေး မရှိတော့ပါ။
ဒါနဲ့ အဲဒီတချီမှာ တကယ့်ကို စတင်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်မဟာ အဖြူရောင် ဝတ်စုံကို စွပ်လိုက်တယ်၊
ကျွန်မရဲ့ ဧရာမ ဆေးထိုးအပ်ကြီးကို
ခြေရာခံ ရနိုင်တဲ့ isotope
ပထမတော့ ဘုဇပတ် ပင်ကိုပါ။
ကာဗွန်-၁၄ ရေဒီဓာတ်ကြွ ဓာတ်ငွေကို
ဘုဇပတ် အပင်ကြီး တစ်ပင်ထဲကို။
ကျွန်မ isotope နှစ်မျိုး သုံးတယ်၊
ကျွန်မ နောက်ဆုံး အိတ်ကို ယူလိုက်တယ်၊
၈၀ မြောက် အပင်အတွက်၊
ကျွန်မ နောက်က လိုက်ပြေးတယ်၊
ဒီကြားထဲ ခြင်တွေကို ခါးထုတ်နေရင်း
"လူတွေ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲ စမ်းသပ်ကြတာ
ကျွန်မ တစ်နာရီ စောင့်ခဲ့ရတယ်။
အပင်တွေအနေနဲ့ photosynthesis ကို
အသုံးချပြီး CO2 ကို စုပ်ယူလိုက်ကာ
အဲဒါကို အမြစ်တွေဆီ ပို့ပေးရန် နဲ့
အော်၊ သူဟာ အဲဒီမှာ ရှိနေလျက်
ဒါနဲ့ ကျွန်မဟာ ကားထဲက
ကျွန်မဟာ ပထမ အိတ်ကို စွပ်ထားတဲ့
ဘုဇပတ်ပင်မှ အိတ်ကို ခွာပစ်တယ်။
အပင်ရဲ့ အရွက်တွေကို Geiger
ဒါနဲ့ အရေးကြီးဆုံး သိရတော့မယ်။
ကျွန်မ ထင်ရှူးပင်ဆီကို သွားတယ်။
Geiger စက်နဲ့ စမ်းတော့
စကားပြောနေတဲ့ အသံ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
"ဟေး၊ မင်းကို ငါကူညီနိုင်မလား?"
ထင်ရှူးပင်ကျတော့၊ "ဟုတ်တယ်၊ ခင်ဗျားဆီမှ
ကာဗွန် နည်းနည်းလေး ပေးနိုင်မလား?
အဲဒီနောက် သစ်ကတိုးပင်ဆီ သွားကာ Geiger
စက်နဲ့ အရွက်တွေကို စမ်းတိုင်းကြည့်တယ်၊
ကျွန်မ သံသယ ဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ၊
၎င်းဟာ ဘုဇပတ် နှင့် ထင်ရှူးပင်တွေနဲ့
အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက် မနေခဲ့ပါ။
တစ်နေရာမှ တစ်နေရာဆီကို ပြေးသွားရင်း
အပင်တွေ ၈၀ စလုံးကို စစ်ကြည့်တယ်။
C-13 နဲ့ C-14 တွေ ကျွန်မကို ပြလိုက်တာက
ဘုဇပတ်ပင် နဲ့ Douglas ထင်ရှူးပင်တွေဟာ
တချိန်လုံး အပြန်အလှန် ပြောဆိုနေခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီ ရာသီမှာ၊ နွေရာသီတွင် ဘုဇပတ်ပင်က
ကာဗွန်ဟာ ထင်ရှူးပင်က ဘုဇပတ်ဆီကို
စမ်းသပ်မှုများထဲ ပြောင်းပြန် တွေ့ခဲ့ရတယ်၊
ထင်ရှူးပင်ကနေ ပို့တဲ့ ကာဗွန်ဟာ ဘုဇပတ်ပင်က
ထင်ရှူးပင်ဆီ ပို့တာထက် များတယ်၊
ထင်ရှူးပင်ဟာ ကြီးထွားနေဆဲ ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့၊
ဘုဇပတ်မှာ အရွက်တွေ မရှိတော့လို့ပါ။
ဒီတော့ အဲဒီ အပင်နှစ်မျိုးဟာ အပြန်အလှန်
yin နဲ့ yang သဘောမျိုးပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ အရာတိုင်းကို ကျွန်မ
ကျွန်မ တွေ့ရှိလိုက်တာ အရေးပါမှန်း
တောထဲမှာ အပင်တွေ အပြန်အလှန်
ဆက်သွယ်ကြပုံဆိုင်ရာ အမြင် ပြောင်းလာရမယ်၊
၎င်းတို့ဟာ ပြိုင်ဆိုင် နေကြတာ မ‘ဟုတ်ဘဲ
ပြီးတော့ ကျွန်မဟာ မြေကြီး အောက်ပိုင်းက
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး ဧရာမ ကွန်ရက်ကြီး
တခြားကမ္ဘာကြီး ရှိနေတာ အထင်အရှား
အခုတော့၊ ကျွန်မ ယုံကြည်မိတာက
ကျွန်မရဲ့ တွေ့ရှိချက်ဟာ သစ်တောဆိုင်ရာ
ပိုပြီး ဘက်စုံပြည့်ဝကာ ရေရှည် တည်တံ့မယ့်
အကုန်အကျ နည်းပြီး လက်တွေ့
ပိုကျမယ့် လုပ်ကိုင်နည်းဆီ ပြောင်းနိုင်မယ်။
သစ်တောလို ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ စနစ်တွေထဲမယ်
သိပ္ပံနည်းကျ ဘယ်လို လုပ်ကိုင်ကြမလဲ။
သစ်တောဆိုင်ရာ သုတေသနီ အားလုံးတို့ဟာ
မိမိတို့ရဲ့ သုတေသနတွေကို သစ်တောထဲ
လုပ်ကိုင်ကြရကာ ကျွန်မ ပြခဲ့သလို ခက်ခဲတယ်။
ကျွန်မတို့ဟာ သိပ်ကို တော်ဖို့လိုပြီး
ဝက်ဝံတွေမှ ပြေးရန်လည်း လိုတယ်။
အဓိကက၊ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲပါစေ
ကျွန်မတို့ဟာ အတွင်းစိတ် နဲ့ အတွေ့အကြုံကို
ထိုက်တန်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးကြရမယ်။
အဲဒီနောက်မှာ ကျွန်မတို့ဟာ ဒေတာကို
လိုက်စုရန် နှင့် စိစစ်ရန် လိုတယ်။
ကျွန်မကိုယ်တိုင် သစ်တောထဲ စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး
ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ ရာချီပါပဲ။
ကျွန်မ စမ်းသပ် စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ စိုက်ခင်း
အချို့ဆိုရင် နှစ် ၃၀ ကျော်နေပါပြီ။
သစ်တော သိပ္ပံပညာက အဲဒီလိုရှိပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီသိပ္ပံအကြောင်းကို ပြောချင်တယ်။
ဘုဇပတ် နဲ့ ထင်ရှူးပင်တွေ ဘယ်လိုလုပ်
သူတို့ဟာ ကာဗွန် ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ သာမက
နိုက်တြိုဂျင် နှင့် ဖေါ့စဖိုရပ်စ်၊
ရေနဲ့ ကာကွယ်ရေး အချက်ပြမှုများ
ပြီးတော့ ကျွန်မ မတိုင်မီတုန်းက
မြေကြီးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ mycorrhiza လို့
ခေါ်တဲ့ အပြန်အလှန် သဟဇီဝ မျိုး
အဲဒီ mycorrhiza က “မှိုအမြစ်” လို့
သစ်တောထဲ လမ်းလျှောက်ရင် သူတို့ရဲ့
မျိုးပွားရေး အင်္ဂါများကို မြင်ခဲ့ကြလား။
၎င်းတို့ထဲမှ ဖြာထွက်လာကြတဲ့ ရိုးတံများ နဲ့
မှိုအမျှင်တွေဟာ mycelium ကို ဖန်တီးကြတယ်၊
အဲဒီ mycelium ကျတော့ အပင်တွေ နဲ့
အပြစ်တွေကို ထိုးဖောက် အပိုင်စီးကြတယ်။
မှိုဆဲလ်တွေက အမြစ်ဆဲလ်တွေနဲ့ အပြန်အလှန်
ခုနက မှိုတွေကျတော့ မြေဆီလွှာထဲတွင်
ကွန်ရက်ဟာ ဘယ်လောက်ကြီးကို သိပ်သည်းသလဲ
ဆိုတော့ ခြေဖဝါး အောက်မှာကို mycelium ဟာ
ကီလိုမီတာ ရာချီ ရှိနိုင်တယ်။
အဲဒီထက်ကို ပိုပြီး၊ အဲဒီ mycelium ဟာ
မျိုးမတူကြတဲ့ ဘုဇပတ် နဲ့ ထင်ရှူးပင်
တို့လို အပင်တွေကိုတောင် ဆက်သွယ်ပေးလျက်
အင်တာနက် ပုံစံမျိုးဖြင့် ကူပေးတယ်။
ဒီတော့ ကွန်ရက် အားလုံးလိုပဲ၊
အဖုများ နှင့် အချိတ်များ ရှိတယ်။
ဒီမြေပုံက Douglas ထင်ရှူးပင် တောကွက်ထဲက
အပင်တိုင်း နဲ့ မှိုပင်တွေရဲ့ DNA ကို
ဒီပုံထဲတွင်၊ စက်ဝိုင်းတွေက Douglas
ထင်ရှူးပင် သို့မဟုတ် အဖုတွေကို
ကိုယ်စားပြုပြီး မျဉ်းတွေကျတော့ မှိုလမ်းမ
သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
အကြီးဆုံး၊ အမည်းဆုံး အဖုများဟာ
ကျွန်မတို့က ၎င်းတို့ကို ဗဟိုအပင်များ
သို့မဟုတ် ပိုပြီး ချစ်စဖွယ်
အဲဒီ ဗဟိုအပင်များက သူတို့ရဲ့ လူငယ်ပိုင်း၊
အောက်ခြေမှာ ကြီးပြင်းလာနေတဲ့ အပင်တွေကို
ရှင်တို့ အဝါရောင် အကွက်တွေ
မိခင် အပင်ဟောင်းရဲ့ ကွန်ရက် အတွင်းမှာ
သစ်တော တစ်ခုအတွင်းမှာ မိခင် အပင်ဟာ
အခြားအပင် ရာချီနဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိနိုင်တယ်။
မိခင် အပင်တွေက ပိုလျှံနေတဲ့
ကာဗွန်ကို mycorrhiza ကွန်ရက် မှတဆင့်
ပျိုးပင်များဆီ ပို့ပေးတာ သိလာရတယ်။
အဲဒီလို ပံ့ပိုးပေးမှုက ပျိုးပင်တွေရဲ့
တိုးပေးတာကို ကျွန်မတို့ တွေ့ရတယ်။
ကျွန်မတို့ အားလုံး ကိုယ့်ကလေးတွေကို
ဝက်ဝံမကြီးက သူ့ကလေးတွေကို သိသလို
သိနိုင်စွမ်း ရှိရဲ့လား ကျွန်မ တွေးမိတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့ဟာ စမ်းသပ်မှု တစ်ခုကို
မိခင် အပင်များနဲ့အတူ မျိုးတူ အပင်များ နဲ့
သူစိမ်း ပျိုးပင်များကို စိုက်ခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ မျိုးတူတွေကို
မိခင် အပင်များက မျိုးတူအပင်လေးတွေကို
mycorrhiza ကွန်ရက်ကြီးနဲ့ သိမ်းယူကြတယ်။
ကာဗွန် အပိုတွေကို ပို့ကြတယ်။
သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အမြစ်တွေရဲ့
မိခင် အပင်ဟာ ထိခိုက်မိတယ်
ဩဝါဒပေးတဲ့ သဝဏ်လွှာများကို ပို့ကြတယ်။
ကျွန်မတို့က isotope ကို သုံးပြီး
ကာဗွန် ရွေ့လျားမှုကို ခြေရာခံကြည့်ခဲ့ရာ
ဒဏ်ရာရထားတဲ့ မိခင် အပင်ရဲ့
ပင်စင် အောက်ခြေရှိ mycorrhiza
၎င်းရဲ့ အနီးရှိ ပျိုးပင်များထံသို့
အဲဒီလို ရောစပ်ထားတဲ့ အရာနှစ်ခုကို
ပျိုးပင်များရဲ့ အနာဂတ် ဖိစီးမှုဒဏ်အား
ဒီတော့ အပင်တွေ စကား ပြောကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်
အဲဒါက ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့
အခုတော့ ကနဦး အချက်ဆီကို ပြန်သွားကြရအောင်။
သစ်တောဆိုတာ အပင်တွေ စုပြုံနေတဲ့
သာမန် နေရာ တစ်ခုမကပါ၊
၎င်းတို့ဟာ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ စနစ်များ
ဖြစ်ကြပြီး ဗဟိုချက်တွေ ကွန်ရက်တွေ ရှိကြကာ
အပင်တွေကို လွှမ်းခြုံ ချိတ်ဆက်ပေးလျက်
ဆက်သွယ် ပြောကြားခွင့် ပေးပါတယ်၊
ပြီးတော့ ၎င်းတို့ဟာ တုံ့ပြန်ရေး နဲ့
ကျင့်သား ရရှိရေး အခွင့်အလမ်းများကို
ဗဟိုချက် အပင်တွေ နဲ့ လွှမ်းခြုံထားတဲ့
ကွန်ရက်တွေ အများကြီး ရှိနေလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ၎င်းတို့ဟာ ထိခိုက်လွယ်ကြပါသေးတယ်။
အိုမင်းလာတဲ့ အပင်တွေထဲမှာ တွေ့ရနိုင်တဲ့
သဘာဝ အန္တရာယ်များကို သာမက
ဖြတ်တောက် ရှင်းလင်းလျက် သစ်ခုတ်မှု
ဗဟိုချက် အပင် တစ်ပင် နှစ်ပင်ကို
အလှည့်အပြောင်း ကာလမျိုး ကြုံရလာနိုင်တယ်၊
ဗဟိုချက် အပင်တွေဟာ လေယာဉ်
သံမှို တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကို
ထုတ်ယူလိုက်တောင် လေယာဉ် ပျံနိုင်သေးတယ်၊
ဒါပေမဲ့ အများကြီး ထုတ်ယူလိုက်ရင်၊
ဒါမှမဟုတ် အတောင်ပံပေါ်က သံမှိုဆိုရင်၊
စနစ် တစ်ခုလုံး ပြိုကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။
ရှင်တို့ အခု သစ်တောကို မြင်ပုံ ဘယ်လိုလဲ။
ကျွန်မ အစောပိုင်းမှာ ပြောခဲ့တာ
မှတ်မိကြလား၊ ကျွန်မရဲ့ သုတေသနက
ကျွန်မရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေ သစ်တော
အဲဒီအချက်ကို ကျွန်မဟာ နှစ် ၃၀ ကုန်သွားလို့
ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ရှိတဲ့ နေရာပါ၊
Banff National Park ရဲ့ နယ်စပ်က ဒေသပါ။
အဲဒီမှာ အပြတ် ခုတ်ထားတာ အများကြီးပါ။
အဲဒါ ဘာမှ မဆန်းပါ။
ကနေဒါ နိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်
အတွင်းမှာ သစ်တော ပျက်ပြုန်းမှုနှုန်းအရ
ကမ္ဘာ့ အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၄ တွင်
World Resources Institute က ဆိုတယ်။
ကနေဒါ နိုင်ငံရဲ့ နှုန်းက
နှစ်စဉ် ၃.၆ % ဖြစ်တယ်။
အဲဒါဟာ၊ ကျွန်မ စိတ်ထင်၊ ရေရှည်ခံနိုင်မယ့်
နှုန်းထက် လေးဆ မြင့်နေပါတယ်။
အဲဒီလို စကေးမျိုးဖြင့် ပြုန်းတီးမှုဟာ
ဇလဗေဒ စက်ဝန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်၊
တောရိုင်း အကောင်များရဲ ဂေဟာကို
ပြီးတော့ လေထုထဲသို့ မှန်လုံအိမ်
ဓာတ်ငွေ ထုတ်လွှတ်မှု ရှိနိုင်တယ်၊
အဲဒါက ပြုန်းတီးမှုကို တိုးလာစေကာ
အပင်တွေကို ပိုပြီး သေစေနိုင်တယ်။
အဲဒါ့အပြင်၊ ကျွန်မတို့ဟာ အပင် တစ်မျိုး
ပေါ့ပလား နဲ့ ဘုဇပတ် ပင်တွေကို
အဲဒီလို ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းဖြင့် သစ်တောကို
စိုက်မှုဟာ ရှုပ်ထွေးမှု နည်းလာနေရာ
အန္တရာယ်ကို တကယ့်ကို ကြောက်ရပါတယ်။
ရာသီဥတု ပြောင်းလာတာနဲ့ အမျှ
အဲဒါဟာ တကယ့် သဘာဝ မုန်တိုင်းကို၊
မြောက် အမေရိက တစ်ခုလုံး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့
တောင်ပေါ် ထင်ရှူးပင်တွေ အပေါ် ကျခဲ့တဲ့
ဒါမှမဟုတ် မကြာမီက အလ်ဘဲရ်တာမှာ
မြင်ခဲ့ကြရတဲ့ တောမီးမျိုး ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မဟာ နောက်ဆုံး
ကျွန်မတို့ရဲ့ သစ်တောတွေကို အားနည်းအောင်
လုပ်မယ့်အစား ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို
ကောင်းတဲ့ အချက်က သစ်တောလို ရှုပ်ထွေးတဲ့
ကုစားနိုင်တဲ့ ဧရာမစွမ်းပကား ရှိကြတယ်
ဗဟိုချက် အပင်တွေကို ထိန်းထားကာ
mycorrhizal ကွန်ရက်များကို ပံ့ပိုးကြမယ့်
ဗီဇ နှင့် ပုံစံမျိုးစုံ အပင်များကို
၎င်းတို့ဟာ လျင်မြန်စွာ ပေါက်လာကြမှာပါ။
ဒီတော့ အဲဒါကို ဦးနှောက်ထဲ ထည့်ထာလျက်၊
ရိုးရှင်တဲ့ နည်း လေးခုကို ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။
ဒါတွေကို လုပ်ဆောင်ရန် သိပ်ကို ခဲယဉ်းမယ်
ဆိုပြီး ငြင်းကွယ်လို့ မရနိုင်ပါ။
ပထမ အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ အားလုံး
သစ်တောကို သွားကြရန် လိုတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ သစ်တောတွေထဲမှာ ဒေသထဲက
ပြည်သူတွေ ပါဝင်ရန် လိုပါတယ်။
ရှင်တို့ မြင်နိုင်ကြသလို သစ်တောတွေကို
အားလုံးကို တစ်ပုံစံတည်းဖြင့် ချဉ်းကပ်
ဒါပေမဲ့ သစ်တောကို ကောင်းမွန်စွာ
စောင့်ရှောက်ရန် ဒေသခံ အခြေအနေကို သိရပါမယ်။
ဒုတိယ အနေနဲ့၊ ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့
၎င်းတို့ဟာ ဗီဇမျိုးများ နဲ့ မိခင်အပင်များ
mycorrhiza ကွန်ရက်များ ရှိတဲ့ နေရာတွေပါ။
ဒီတော့ သစ်ခုတ်မှု နည်းလာရပါမယ်။
လုံးဝ မခုတ်ရလို့ မဆိုလိုဘဲ
တတိယ အနေနဲ့၊ ခုတ်ရမယ်ဆိုရင်၊
မိခင် အပင်များ နဲ့ ကွန်ရက်များကို
၎င်းတို့ရဲ့ အမြော်အမြင်ကို မျိုးဆက်အသစ်
၎င်းတို့အနေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရမယ့် အနာဂတ်
ဖိစီးမှုများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် လိုပါတယ်။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့၊ စတုတ္ထအနေနဲ့၊
ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ သစ်တောကို အပင်
အမျိုးအစား၊ မျိုးရိုးဗီဇ နဲ့ တည်ဆောက်မှုအရ
ကုစားရန် လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတွေကို
ပြီးတော့ သစ်တော ဆိုတာ အချင်းချင်း
ပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ အပင်တွေ မဟုတ်ဘဲ
ကျွန်မ ရဲ့ Jigs ဆီ ပြန်သွားမယ်။
Jigs ဟာ အိမ်နားမှာ တွင်းထဲ လဲကျသွားကာ
ကျွန်မကို ကမ္ဘာကြီး တစ်မျိုးကို ပြခဲ့တယ်၊
အဲဒါက သစ်တော အပေါ်ထားရှိတဲ့
ကျွန်မရဲ့ အမြင်ကို ပြောင်းပစ်ခဲ့တယ်။
ဒီနေ့တွင် သစ်တောဆိုင်ရာ ရှင်တို့အမြင်ကို
Suzanne Simard: အပင်တွေ အချင်းချင်း စကားပြောကြပုံ | TED Talk | TED.com